Izinto Zemishini Yezimboni - Izingxenye Zensimbi Ngokwezifiso | Isitolo se-PTJ
Ikhaya > Izinhlobo zezinto ezibonakalayo
Uhlome futhi unolwazi lokunikeza izinketho eziningi zemishini nezinto ezibonakalayo
futhi Ukukhetha impahla eyi-CNC efanelekile ku-PTJ Shop
Amakhasimende e-PTJ Shop anenkululeko yokucacisa izingxenye kumakhulu ahlukene izinsimbi futhi plastic.
Kukhona ukulinganiselwa osayizi nobukhulu bezinye izinsimbi namapulasitiki ngoba akuzona zonke izingxenye ezingenziwa kukho konke okubhaliwe.
Imishini yangokwezifiso iqukethe isethi yemisebenzi ehlukahlukene ngokumangazayo.
Ukugcina leli zinga kudinga ukuzibophezela okuhlukile kuzinsizakusebenza zokukhiqiza. Izinhlobonhlobo zezinketho zobuchwepheshe bemishini emtatsheni wezincwadi womshini we-PTJ zisekelwa yikhono langaphakathi lamathuluzi eliguqulela amathuluzi kuzici ezihlukile zento ngayinye. Ngemuva kwakho konke kunabasebenzi bonjiniyela nochwepheshe bemishini abanerekhodi lonyaka eli-10 + lokuzivumelanisa nama-alloys amasha kanye nezinto ezizamekile neziyiqiniso.
Sinikeza Ukuvula futhi milling, I-axis ye-3 , 3 + 2 eksisi & mazak eqhubekayo 5-eksisi CNC machining.
Samukela imisebenzi yokugijima emincane nemikhulu, ubuncane be-oda yi-1.
Izikhathi zokuhola ezimfushane zivame ukutholakala izinsuku 2-3.
Isikhathi sokuhola esijwayelekile si 2 amasonto.
Xhumana nathi mizinto eziqaqambayo imishini namuhla ukuxoxa ngokuningiliziwe kwezingxenye zakho eziyinkimbinkimbi.
I-PTJ inedumela lokusebenzisa ngempumelelo izinto abanye abakhiqizi abakhetha ukungaziphathi. Amakhasimende angaklama ngokuzethemba ngezinto ezintsha, ephephile ngokwazi ukuthi i-PTJ ingakwazi ukwenza umshini ngisho nezinhlobo zezinto ezingafani kakhulu, zekhwalithi, nomphumela osebenza kahle.
▶ Machining ukubekezelelana kuze kube ± .0005 ″.
▶ Kunikezelwe ukugcina ikhwalithi engaguquguquki ngokuphoqelela ukusebenzisa imishini yokulawula ikhwalithi eqinile.
▶ UBUFAKAZI BEKHASIMENDE LETHU ETHEMBEKILE
Xhumana nathi Isitolo Somshini we-CNC ukuxoxa ngezingxenye zakho zemishini namuhla.
ViImininingwane ye-ew >> 21 Buka Deumsila >>